ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: မလေးရှားမှ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ရန် ပတ်စပို့စာအုပ်လက်ဝယ်မရှိသူများ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်
မလေးရှားမှ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ရန် ပတ်စပို့စာအုပ်လက်ဝယ်မရှိသူများ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်
ယနေ့ မလေးရှားနိုင်ငံက နေ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ပြန်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်တာ ကျွန်တော်တို့ post တင်ပြီးကတည်းက မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ သူ တွေ ရဲ့ဖုန်းတွေ 24 နာရီ မနားတမ်းမည်နေခဲ့ပါတယ် ။ အကြောင်းအရာကတော့ မေးခွန်း တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ် .......
1. မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လိုပြန်ရမလဲ ကျွန်တော်တိုက အိုဗာစတေးဖြစ်နေလို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့2ကြိမ်မြောက်ထပ်မံတင်ဆက်ပါ့မယ် ။
(က) သင့်ထံတွင် ပတ်စပို့စာအုပ်လက်ဝယ်ရှိပြီး ပါမစ်မရသေးသူဖြစ်ပါသလား ?
လုပ်ဆောင်ရန်မှာ ကျွန်တော်တို့ထံတွင် Shpw Ticket ခေါ် အင်မီဂရေးရှင်း တွင်ပြသရန် လေယာဉ်အကြိုလက်မှတ် အခမဲ့ လာယူပါ ၊ ပြီးပါက မလေးရှားနိုင်ငံ နီးစပ်ရာ လဝက ရုံးများသို့ သွားရောက်ပြီး Special Pass ပြုလုပ်ရန်အတွက် တိုကင်သွားထုတ်ရပါလိမ့်မယ် ။
ယခင်က ကွာလာလမ်ပူ ဂျလန်း ဒူတ မှာလည်းဆောင်ရွက်ပေးပေမယ့် ယခုကွာလာလမ်ပူတွင်တော့ Putra Jaya (မလေးရှားအစိုးရရုံးစိုက်ရာဌာန) တွင်သာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတော့တယ် ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတစ်ခုက ယခုမလေးရှားလဝကက တုကင်သွားထုတ်တဲ့သူတွေအားလုံးကို3လ ခွာချိန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ မြန်မာသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ တရားဝင်စာထုတ်ပြန်ပြီး ထို့ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်အောင်ကူညီမယ်လို့ သိရပေမယ့် ယနေ့ထိတော့ ဖြစ်မလာခဲ့သေးတာတွေ့ရပါတယ် ။
ထိုသို့ရက်ချိန်းရပါက မိမိကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် Special Pass အတွက် ဒဏ်ငွေ မလေးရှားရင်းဂစ် 400 တိတိ ပေးဆောင်ရမည့်ဖြစ်ပြီး Special Pass ပါရက်များအရ5ရက်အတွင်း မလေးရှားကထွက်ခွာပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ် ။
ထိုသို့ ရက်ချိန်းရမှသာ လေယာဉ်လက်မှတ် ကြိုတင်ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ မလေးရှားကို ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းက ယနေ့ လေယာဉ်လက်မှတ် အစောင် 1000 ကို စတင်လှူဒါန်းနေပြီးဖြစ်တာကြောင့် မကုန်းမချင်း ဒုက္ခရောက်သူ ဦးစားပေးစနစ်နဲ့ တောင်းယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် ။
2. သင့်ထံတွင် ပတ်စပို့စာအုပ်လက်ဝယ်မရှိလျှင် .... ?
ပြန်ချင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့မှာ ပတ်စပို့စာအုပ်မရှိပါဘူး မိတ္တူပဲရှိပါတယ် (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်ပဲရှိပါတယ် (သို့မဟုတ်) ဘာမှမရှိပါဘူး .ဘယ်လိလုပ်ရမလဲ ...
မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်ပေးထားတဲ့ မှတ်ပုံတင် ၊ အိမ်ထောင်စုဇယား ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ တို့ကို မှာယူပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးမှာ CI သွားရောက်လျှောက်ထားရန်လိုပါတယ် ....
CI အတွက် အခမြဲ့ဖစ်ပါတယ် ။
CI လျှောက်ထားမည့် မည်သူမဆို အဆိုပါ
1. မှတ်ပုံတင်မူရင်း(သို့) မိတ္တူ
3. ရပ်ကွက် ၊ ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ တို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ် ။
ဆက်လက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘာဆိုဘာမှမရှိပါဘူး တကယ်လဲဒုက္ခရောက်နေတာပါ ၊ မှာစရာမိသားစုလဲ မရှိတော့ပါဘူး ..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ..
မြန်မာသံရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေထံမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း သွားရောက် စစ်ဆေးခံပါခင်ဗျာ .....
CI လျှောက်ထားရမည့် ဖောင်ပုံစံကိုပါ ကျွန်တော်တို့ ပူးတွဲ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ကူးယူ Print ထုတ်ပြီး အချက်လက် ဖြည့်စွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ် ။
အားလုံး တွေ့ကြုံနေတဲ့ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ မလေးရှားရောက် မြန်မာတွေပြည်တော်ပြန်ဖို့ကို ထပ်မံ ရှင်းပြပေးတာပါ ...
ယနေ့ထိတော့ ဆောင်ရွက်သူအားလုံ3းလတိတိစောင့်ဆိုင်းနေကြရတဲ့အကြောင်းကို သိအောင် ထပ်မံရေးသားပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ ။